မျိုးနဲ့ရိုးနဲ့ အကြမ်းဖက်စစ်တပ် ထောက်ခံသည့် မိသားစုကို မြောင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များက ပညာပေးဆုံးမမှုများပြုလုပ်ခဲ့ - Myanmar Pressphoto Agency
MPA January 15, 20222min read
Photo - CDSOM
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊မြောင်မြို့နယ်၊ဆွဲလဲအို ကျေးရွာတွင် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ ထောက်ခံသည့် မိသားစုကို မြောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးအဖွဲ့ ၊ Myaung Union Army ၊ Myaung Women Warriors ၊ နှလုံးလှလူမိုက်ကြီးများအဖွဲ့ နှင့် မြင်းမူလျှပ်စီးပြောက်ကျားအဖွဲ့တို့ သွားရောက်ကာ ပညာပေးဆုံးမမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း မြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးအဖွဲ့က သိရသည်။
မြောင်တပ်ဖွဲ့၀င်များသည့် မီးလောင်ခံရသည့် အိမ်ထောင်စုများထံသို့ လူသားစာနာမှုအနေဖြင့် ပြည်သူများမှ ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ ထံသို့ ပံ့ပိုးကူညီထားသော အထောက်အပံ့များ သွားရောက် ကူညီလှူဒါန်းနေသည့်အချိန်တွင် ဒေသခံပြည်သူများ၏ တောင်းဆိုချက်အရ အဆိုပါမိသားစုကိုလည်း အိုးမဲ့အိမ်မဲ့နေထိုင်ရမှု တူသောအကျိုးခံစားစေချင်သည့်အတွက် ပညာပေးဆုံးမရခြင်းဖြစ်ကြောင်း မြောင်တပ်ဖွဲ့၀င်တစ်ဦးကဆိုသည်။
“ ဆွဲလဲအိုကျေးရွာနေပြည်သူတို့ရဲ့ တူသောအကျိုးလုပ်ဆောင်စေတဲ့အတွက် မျိုးနဲ့ရိုးနဲ့ စစ်တပ် အသိုင်းအဝိုင်းထောက်ခံ DSA နဲ့ စစ်ဆေးကျောင်းဆင်းရှိတဲ့ မိသားစုအိမ်ကို ပညာပေးခဲ့တယ်။ သူတို့အိမ်မှာမရှိတော့ အိမ်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး တစ်ချို့ကိုပြည်သူပိုင်သိမ်းခဲ့ပြီး ခွဲဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ “ ဟု မြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးအဖွဲ့၀င်တစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါမိသားစုသည် ဇန်နဝါရီလ ၁၃ရက်နေ့တွင် အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများ၏ နေအိမ် (၁၃) လုံးအား မတရား မီးရှို့ဖျက်စီးပစ်ရန် သတင်းပေးပို့ခဲ့ခြင်းကိုထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ယင်းမိသားစုထဲမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် နိုင်ငံရေးပါတီဝင်ကဒ်(၃)ခု ကိုင်ဆောင်ထားပြီး ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ သတင်း အချက်အလက်အတိအကျဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၇ရက်နေ့၌ ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ နေအိမ်များအား ဖျက်စီးစေလိုသော အလို့ငှာ စစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်သမားများအား ကားတစ်စီးဖြင့် လိုက်လံ၍ လမ်းပြဖော်ကောင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လုပ်ရက် ထင်ရှားကာ မှတ်တမ်းအဖြစ် ရှိနေခဲ့ကြောင်း မြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားသည်။
#မြောင် #cdsom #စစ်ကိုင်းတိုင်း #တပ်မတော်ထောက်ခံသူ
Myaung Coalition Forces Educate Family which has Supported Terrorist Military in Generations
A family in Swe Lay O village, Myaung township of Sagaing region, which supports the terrorist SAC was educated and givenalesson by Myaung Township People’s Defense and Security Group, Myaung Union Army, Myaung Women Warriors, Kind-Hearted Gangsters and Myinmu Lighting Guerilla Group, according to Myaung Tonwship People’s Defense and Security Group.
While the Myaung Forces were distributing supplies which the people had supported with to the local defense forces to fire victims asahumanitarian act; on the request of the locals, the family was educated and givenalesson so that they can share the same feeling of having no home and no food, said one Myaung force member.
“As we wanted them to feel the same feeling as Swe Lay O villagers are feeling,afamily withaDSA graduate was educated. Every item in their house was destroyed. Some were seized as public property and shared”, saidamember of Myung Township People’s Defense and Security.
The family in question had reported for the burning of 13 homes of innocent civilians on January 13.
One woman from the family holds membership cards of three political parties and on October7of 2021, she had guided around the SAC terrorists homes of local defense forces members, for destroying, witharecord of their exact information. So, she had this obvious evidence in record, Myaung Township People’s Defense Forces and Security reported.
#Myaung #CDSOM #SagaingRegion #MilitarySupporter
Tags: CDSOM MPA Myanmar Myuang PDF SagaingRegion
Previous: ဒီပဲယင်းတွင် မိုင်းရှင်းလင်းရေးပြုလုပ်နေသည့် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်များမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရ
Next: ကလေးမြို့ ပကဖ ကျဆုံးရဲဘော်များအတွက် သက်ပျောက်တရားနာခြင်းနှင့် အမိန့်ပြန်တမ်းအခမ်းအနား ပြုလုပ်